Uphengululo lweNcwadi: 'Abafazi abangaqhelekanga' kufuneka ukuba ube ngowakho kuBalandeli beHorry Classic
Imiboniso bhanyabhanya eyoyikisayo
Ukoyikeka kwengqondo (ii-thrillers)
Engaqhelekanga kwaye engaqhelekanga
Umnyhadala weFilimu yeHorror
Ikhaya Iincwadi ezoyikisayoInkolelo Uphengululo lweNcwadi: 'Abafazi abangaqhelekanga' kufuneka ukuba ube ngowakho kuBalandeli beHorry Classic
InkoleloIincwadi ezoyikisayoIindaba ezothusayo zoLonwabo
by Waylon Jordan Agasti 3, 2020
ibhalwe ngu Waylon Jordan Agasti 3, 2020
Abafazi abaQhelekileyo: Amabali aQhelekileyo aQhelekileyo aQhelekileyo ngaBabhali abaSetyhini: 1852-1923I-anthology entsha kraca yamabali apholileyo, iphume ngo-Agasti 4, 2020 kubahleli ULisa Morton kunye noLeslie S. Klinger. Kunyanzelekile ukuba ubenakho abo banomdla kwabasetyhini abancede ekubumbeni uhlobo oloyikisayo.
Ingqokelela inamabali nje angaphaya kwama-20 ezinto ezingaqhelekanga nezingaqhelekanga, ezinye zisuka kubabhali ongathandabuzekiyo ukuba uvile amagama abo, kwaye abanye abo bonke kodwa bawele ekusithekeni balondoloze ukufakwa kwabo kwiingqokelela nakwingqokelela amaxesha ngamaxesha.
Okulusizi kukuba, amaxesha amaninzi amabali anje ngala ayaqokelelwa, uluhlu phantse lwenziwe ngababhali abangamadoda ngokufakwa kokubhaliweyo okukodwa okanye okubini ngabafazi ababebhala ngexesha elinye. Ngombulelo, uKlinger noMorton bagqibe kwelokuba lixesha lokuba aba bafazi banetalente bathethe.
Abafazi abangaqhelekanga iqala ngo-Elizabeth Gaskell Ibali loMongikazi Omdala. Ishicilelwe ngo-1852, ibali lixelelwa ngumntwana osele ekhulile onxulumene neqela labantwana ibali elibandayo elibandakanya ugogo wabo xa wayeselusana. Yintsomi egqibeleleyo ukuseta ithoni malunga nento oza kuyifumana kwintsalela yengqokelela. Ukwangumzekelo ophambili wokuba kutheni uninzi lwabasetyhini ababhali belo xesha begxothiwe.
Wayesefiphele ebumnyameni xa u-Lord David Cecil-umbhali-mbali kunye nomfundi-wabhala esithi "ubengumfazi wonke" kwaye wenza "umzamo othembekileyo ukoyisa ukusilela kwakhe kwendalo kodwa konke kulilize." Ngokudabukisayo, olu hlobo lwezimvo zigxeka umsebenzi wakhe phantse iminyaka engamashumi amabini de ababhali abakwiminyaka yama-50s nama-60s baqala ukuphinda bafunde uGaskell kwaye bafikelela kwisigqibo sokuba izimvo zakhe zazingaphambi kwendalo kwimbutho yabasetyhini eyacacisa ukuba kutheni abantu abaninzi bexakekile abagxeki besilisa benkulungwane yokuqala yama-20 babekhethe ukugxotha umsebenzi wakhe.
Kukho ke ababhali abanjengoLouisa May Alcott amagama abo uwaziyo ngokuqinisekileyo, kodwa ngekhe wazi ukuba batyhwithe iinzwane zabo kumandla angaphezu kwendalo / kwindawo eyoyikisayo amaxesha ngamaxesha. Abafazi abancinci ngokungathandabuzekiyo ngowona msebenzi wakhe waziwayo, kodwa Ukuphulukana nePyramidi; okanye, Isiqalekiso sikaMama ukusuka kwiindawo ze-1869 u-Alcott kwimephu yoncwadi njengomnye wabafazi bokuqala ukubhala ingxelo ebaliweyo "yesiqalekiso sikaMama".
Ndiyayithanda noCharlotte Perkins Gilman's IGiant Wistaria. Malunga naye nabani na othathe inqanaba labasandula ukungena kwikhosi yeLit kwikholeji uqhelene nombhali Iphepha elityheli, kodwa bambalwa abanokuba bafundile eli bali, ibali lesiporho elijongana neminye yemixholo efanayo nomsebenzi owaziwayo.
Eyona nto ndiyithanda kakhulu ngale ngqokelela – kunye nezinye iingqokelela ezinje ngayo - kuxa ndiziswe ngemisebenzi kunye nababhali endingakhange ndifunde bona ngaphambili.
Thatha umzekelo Ingcuka eyayiWolf ibhalwe nguClemence Housman. U-Housman wayengumbhali kunye nomzobi. Kwenzeka ukuba abe ngudade wembongi u-AE Housman. Eli bali libandakanya uninzi lweembono zabo babephatheke kakubi ngokuchasene nezithintelo zesini zelo xesha, bezisongele ngebali eliqobayo, kodwa elingenakuphikwa lihle malunga nenkunzi yabasetyhini.
Abafazi abangaqhelekanga Ekugqibeleni isebenza ngenxa yamabali kunye nababhali uKlinger noMorton abakhethileyo. Banikezela icandelo elinqamlezileyo labasetyhini abapapashe ngeli xesha, kugxilwe kwiintsomi ezingabhalwanga kakuhle kuphela kodwa ziyinyani yokwenyani. Banikezela nge-bio emfutshane ngombhali ngamnye ukuze ufunde okungakumbi malunga nabasetyhini abakhoyo kule ngqokelela.
Incwadi iyafumaneka uku-odola kwiAmazon ngo UKUQALA KAPHA. Andinakukucebisa ngokwaneleyo ukuba ungumlandeli weentsomi ezingaqhelekanga nezingaqhelekanga.
intethoUhlolo lweNcwadiU-Leslie S. KlingerULisa MortonWaylon JordanAbafazi abangaqhelekanga
UWaylon Jordan ngumlandeli wobomi bonke bentsomi kunye nefilimu ngakumbi ezo zinento engaphezu kwendalo. Ukholelwa ngokuqinisekileyo ukuba uloyiko lubonisa uloyiko oluhlanganyelweyo kuluntu kwaye lunokusetyenziswa njengesixhobo sotshintsho lwentlalo.
UJohn Cusack kunye noHugh Grant baphantse badlala kwiLecter 'eHannibal'
USam Neill ubuya ngokusesikweni 'kwiJurassic Park: iDominion'
'Igqwirha' kunye 'neNdlu yokuKhanya' yeFilimu elandelayo yoMlawuli ...
Ngamana 15, 2021
'Ukomoya: Ukusuka kwiNcwadi yeSaw' yiFranchise's ...
Ngamana 14, 2021
URobert Englund uqalile iMiboniso bhanyabhanya kwi 'Stranger ...
Ngamana 13, 2021
'Abahloli bakaJoe Dante' bafumana uMqokeleli oMkhulu ...
UMlawuli uDarren Lynn Bousman's Uncanny Evolution ovela kuSaw ...
UDemi Lovato uyeza kwi-TV ye-Docu ...
Ngamana 12, 2021
IMetalocalypse ibuya umva ngeFilimu-ubude beFilimu ...
Ngcono nangakumbi, 'Umkhosi wabafileyo' ...
BUKELA: Inqwelo erhuqwayo ethi 'The Forever Purge' Yophula Zonke i ...
'I-Texas Chainsaw Begins' ngoku sisihloko esinokubakho ...
Khangela iiCateories Khetha Udidi IAmazon (imuvi) (7) IAmazon (uthotho) (9) I-AppleTV + (2) Imitha yeBlu (4) Uloyiko oluhlekisayo (46) IiComics (12) I-Facebook (uthotho) (1) Intsomi (32) Ifunyenwe imifanekiso (26) Gore (24) I-HBO (iimuvi) (4) I-HBO (uthotho) (7) Iincwadi ezothusayo (44) Iindaba eziHoror zokuzonwabisa (10,487) Iimboniso eziHoror (181) Uthotho lwezoyikisayo (52) Iziganeko ezoyikisayo (9) IHulu (uthotho) (4) Udliwanondlebe (bhanyabhanya) (32) Udliwanondlebe (uthotho) (2) Ukoyikeka kwe-LGBTQ (29) Uluhlu (iimuvi) (37) Uluhlu (uthotho) (2) Kwindawo yentengiso (19) Ukoyikeka kweMonster (9) Uphengululo bhanyabhanya (43) Iimuvi (11) Umculo (35) INetflix (imuvi) (16) INetflix (uthotho) (20) Izinto ezingamabali (3) Iparanormal (75) Ukoyikeka kwengqondo (ii-thrillers) (52) Uphengululo lothotho (7) Shudder (imovie) (39) Shudder (uthotho) (15) Isley (4) Engaqhelekanga kwaye engaqhelekanga (35) Imiboniso bhanyabhanya esasazayo (49) Uthotho lweeNkqubo (17) Izinto zokudlala (2) Itreyila (imovie) (138) I-trailer (uthotho) (32) Ulwaphulo-mthetho lwenene (41) Imidlalo yevidiyo (165) I-YouTube (imuvi) (3) I-YouTube (uthotho) (11)
@ 2021-Konke kulungile kuGciniwe.